Muralka lagu sharfayo George Floy ee Portland Apple Store waa la keydin doonaa | Waxaan ka socdaa mac
Dilkii George Floyd wuxuu ahaa kacaan dhab ah oo ka dhacay Mareykanka. Waxay ku dhammaatay inay ku faafto adduunka oo dhan. Midab takoorku wuu sii jirayaa waana mid ka mid ah culaysyada halakeeyay bulshadeena. Taasi waa sababta aysan u dhaawaceynin in la xusuusto. Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo, laakiin mid ka mid ah waa iyada oo loo marayo sawirro si iskood ah loo sameeyay. Sawirka laga sameeyay hareeraha Apple Store ee Portland ayaa loo keydin doonaa farcanka dambe.
Muraalo badan ayaa burburay laakiin muralka lagu sharfayo George Floy ee ku yaal Portland Apple Store waa la keydin doonaa.
Dilka George Floy wuxuu ahaa warbaahin iyo kacaan bulsheed oo eeda ugu weyn ay ahayd la dagaalanka cunsuriyada. Lagu soo koobay hal jumlad: "Ma neefsan karo", dhaqdhaqaaqyo ayaa ka kacay dhammaan magaalooyinka Mareykanka. Kadibna waxay ku faafeen adduunka oo dhan.
Mid ka mid ah sawirrada sida aadka ah u soo jiitay dareenka muwaadiniinta iyo shirkadda Apple ayaa ahaa sawir gacmeedyo laga sameeyay waddada weyn ee caasimadda Mareykanka. taasi xitaa waxay ka muuqatay khariidadaha Apple. Tani waxay ahayd mid ka mid ah go'aannadii ay shirkadda Californian ay ku billowday dhaqdhaqaaqa Madowga Nolosha Madoow.
Xitaa maanta, Apple ma doonayo inuu iska iloobo. Muralka ku xeeran Portland Apple Store lama burburin doono waxaana loo keydin doonaa tabarucaad dambe. Layaab maleh, tan iyo bishii Juun, goobta xusuusta ee Apple Pioneer Place ayaa soo jiidatay indhaha warbaahinta. Xubnaha bulshada waxay sii wateen inay kaga tagaan boodhadhka, ubaxyada iyo shumaca jaranjarada bakhaarka hortiisa.
Sawirka ayaa laga beddelay farriin fudud oo loo beddelay cajalad dhaqan muhiim ah leh kaas oo qabta ruuxa mudaharaadka sinjiga jinsiga ee 2020.
Apple ayaa sheegtay in maanta ay dusha ka saari doonaan alwaaxda ilaaliyaha ee muraayadaha madow ee ku yaal dukaankeeda hoose ee Portland si loo ilaaliyo farshaxanka taariikhiga ah "loogu deeqo mustaqbalka."
Shirkadda ayaa sheegtay inay faahfaahin ka heli doonto qorshooyinka muddada-dheer ee darbiyada horraantii 2021. pic.twitter.com/kKsDWIylfI
In kasta oo muraayadaha kale ee Madowga ah ee Nolosha Madoow ee Apple Stores adduunka oo dhan laga saaray horaantii sanadkaan, Apple ma aysan taabanin goobta Pioneer Place illaa iyo hadda. Waxa la go'aansaday ayaa ah in Apple ay dhigi doonto plywood difaac ah. Ku dhawaaq qorshooyinka muddada-dheer ee farshaxanka horaantii 2021.
Dukaanka Apple ee Portland ayaa la fuulay kadib markii qaar ka mid ah #BlackLivesMatter mudaaharaadyada iyo farshaxankan xoogga leh ayaa ku koray meeshiisa: pic.twitter.com/BHUxgk3iVs
- Spencer Lindsay (@nacaybtire) June 15, 2020
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Muralka lagu sharfayo George Floy ee Portland Apple Store waa la keydin doonaa
Kooxda Soy de Mac waxay kuu rajeyneysaa Ciid Wanaagsan!